Chimwe chikamu chekurekodhwa kweArincess Diana kwaiva mumutsara
Nyeredzi Dhinda pamusoro pe nyeredzi
Gore rino pasina kuwedzererwa kunogona kunzi "gore reDaily Dee". Mukusangana nemakore makumi maviri ekufa kwekutambudzika kwakaipa kweBrithani mukuru, mamwe mashoko akawanda ehupenyu hwehupenyu hwake hunoonekwa munhau. Vakawanda vavo vanogona kunetseka chaizvo. MuWestern tabloids ikozvino uye zvinyora zvidimbu zvezvinyorwa zvakadhindwa zvinyorwa zvemudzvinyiriri. Munguva yavo, vakaitwa naAndrew Morton. Dhiana Diana haana kuzeze kutaurira mutori wenhau pamusoro pezvinhu zvisingafadzi zveupenyu muupenyu.
Munguva ichangopfuura, tichitora mufananidzo "Diana, amai vedu: hupenyu hwake uye nhaka," rimwe basa rinokurukurwa zvakasimba: "Diana: kubva pamashoko ake." Inogona kuonekwa pamusana weNational Geographic / For the script inotorwa zvose zvakafanana zvinotyisa faira mafaira.
Chiitiko cheGreek kana circus?
Zvichida hachisi chakavanzika chokuti imba yaCharles Charles naDiane Spencer vakanga vasina kufara. Nhaka yekorona yakamanikidzwa kuroora musikana asingadiwi, asi akaenderera mberi kusangana na tenzikadzi wake, Camilla Parker-Bowles. Diana aishungurudzika zvikuru, nokuti aida murume wake aiva nemhepo ine simba, uye kwete yezvinyorwa.
Mumhuri yavo yose, Prince Charles aive naCamille, uye Diana ainyatsoziva nezveupombwe. Mwanakomana chaiye waErizabheti II akadana hupenyu hwake muchende katatu, chete "dambudziko rechiGiriki". Pane imwe nguva, Lady Dhain ainge asarudza kuve nemafungiro asina kufanana nemukadzi uyo murume wake akada kwazvo. Akasangana naCamilla pane chimwe chezviitiko, uye pakati pavo pakanga pane kukurukurirana kwakadaro:
"Ndakamuudza Camilla kuti ini ndaiziva zvose, asi iye aiita seasinganzwisisi zvandaireva. Ipapo ndakataura zvakananga, Ndinoziva zviri kuitika pakati pake naCharles, uye ipapo ndakawana mhinduro isina kutarisirwa. Camille akati, "Iwe une zvose zvaunogona kuwana. Iwe unonamatwa nevarume vazhinji, une vanakomana vakanaka vaviri, chii chimwe chaunoda? ". Ndakashamisika kunzwa izvi kubva kuna tenzikadzi wemurume wake, ini zvechokwadi handina kutarisira. Ipapo ndakati ndinoda murume wangu uye hapana chimwe chinhu. Akati chete "Zvakanaka" uye akatarisa pasi. Ndakapfuurira: "Ndinonzwisisa kuti ndiri mukukurumidza kukuru, uye iwe unotambudzwa nenyaya ino isingafadzi. Asi usandiita ini idiot! ".
Kwete chete mambokadzi
Mumwe anogona kungofungidzira kuti mweya wei Diana wakakumbira kubva kubvumo iyi, kukurukurirana kunonyadzisa pamwe nemambokadzi wemurume wake. Zvingangodaro, nekuda kwematambudziko evanhu uye kuedza kuzviuraya, Diana aakaziva kuti akanga asina kufanirwa kuva Mambo weBrithani:
"Manheru oga oga, ndisati ndarara, ndinodzima magetsi uye ndinoongorora zuva rangu. Ndinonzwisisa kuti ndiri kuita zvandinokwanisa, asi izvozvo hazvigoni kundibvumira kuti ndive mambokadzi zvakare. Handimboiti. "
25 ramangwana madzimambo eGreat Britain
Chimwe chikamu chemuchato wechato weChristine Diana chiri kutengeswa
Tsika dzisiri dzekuzvarwa kwevana vamambo
Mudzimai Dee aiita sokuti ane chimiro chekupedzisira kwekupedzisira kwake. Sezviri pachena, kuvimbiswa uku, kwakataurwa nemakore ake akapfuura uye kwakanyorwa pamusoro pekodheta, kunogona kuita kuti bhomba rinoputika mumatare.
Pascal Duvier akatanga kuputsa runyararo ndokuudza nezvekupamba kwaKim Karadshyan
Hugh Jackman akapa hurukuro pamutambo weimba "The Greatest Showman"
Sandra Bullock akapa hurukuro mubatsiro rekutanga kwe "Eight Ocean Girlfriends"
Zvakavanzika zvehutano hwemukadzi wokutanga weU.SA
Pamela Anderson akada mari yeCoco de Mer
Jennifer Lawrence akajekesa zvikonzero zvekuparara naDarren Aronofsky
Emma Watson akatora chikamu mumushandi kubva BuzzFeed mukumbundirana ne ... kittens
Akasimuka-parishioner of the Church of Scientology Leah Remini akadana Tom Cruise munyengeri uye munhu akaipa
The Disney Channel yakakurudzira kunyadziswa kweSelena Gomez!
Ben Affleck akaziva chokwadi chekushungurudzwa muupenyu hwake
Nyeredzi dze "American horror story" dzakagadzirisa ukama hwavo!
Jessica Biel akareurura kuti haadi mwana wemunguva yemberi sababa vake
Macaulay Calkin kwekutanga kokutanga mumakore mazhinji akapa hurukuro
Zviratidzo zvaSara Jessica Parker pamusoro pevhesi naRobert Downey Jr.
Nzira yekugadzirisa Kuziva Kwevanhu
Zvishongedze nemucheka wenguvo
Kupfekedza matafura eimba yekurara
Pepper yakashambidzwa neuchi
Nzira yekuziva sei kuti iwe unofarira murume Capricorn?
Mwarikadzi Astarta muzvinyorwa
Living Room Furniture - Photo uye Design Ideas
Raincoat ane maoko
Pate yenguruve chiropa kumba
Dhairrhea mushure memishonga inorwisa mabhakitiriya - maitiro ekurapa sei?
Strawberries ane strawberries
Nguruve yakabika pork pamba
Ndingaita here kuti ndive nepamuviri nekuputira?
Shakira Theron anoziva nzira yekupinda murwizi imwechete kaviri!
Chirwere chePalinson - chinokonzera uye kurapa
Nei vana vane cerebral palsy vakaberekwa? Zvinokonzera
Chii chokubika kwekudya kwekudya nokukurumidza?